Hadda waxaannu ogaannaa sababta ay ujirta dhulbowrka Israel uu ku dhacay dayaxa - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Waxaan hadda ognahay sababta dhulka laamihiisa Israel uu burburay dayaxa - BGR
Waxaan hadda ognahay sababta dhulka laamihiisa Israel uu burburay dayaxa - BGR
Shalay, Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ee dayax-gacmeedku dhamaaday si aan caadi ahayn oo aan macquul ahayn . Spaceil ee dayax-gacmeedka Beresheet, oo ah qayb ka mid ah hawlgabka gaarka ah ee maal-galinta ee Israel ka dhigtay dalka afraad ee ku guulaysata inuu bilawday dayaxa, ayaa ka baxay finalkii ugu dambeeyay.
Isla markiiba ka dib shilkii LG, ma cadda. dhab ahaan waxa khaldan. Dhibaato la xiriirta mashiinka qalabka isboortiga ayaa la tuhunsan yahay, laakiin calaamadaha ku dhacay hoos u dhaca ayaa lumay wax yar ka dib markii la bilaabay mishiinka. Sidaa darteed way adagtahay in la helo jawaabo. Ka dib markaad barato xogta isku dayga soo noqoshada, SpaceIL waxay fikrad ka qabtaa wixii dhacay.
"Macluumaadka farsamada horudhaca ah ee ay ururiyeen kooxuhu waxay muujinayaan in dhibaatada koowaad ee farsamada ay ka dhacday xero 14 oo ka sarreysa Xeebta," SpaceIL lagu sharaxay tweet . "Mitirka 150, marka la isku xiro #Beresheet waa luntay, waxay ku socotay 500 km / h, iyada oo shil gaari aan la hurin."
"Mashiinadeennu waxay aaminsan yihiin in dhibaatada farsamada ee mid ka mid ah qaybaha ay sababtay mishiinka ugu weyn ee la xiro. hoose - taasoo ka dhigaysa mid aan suurtagal ahayn in la yareeyo baaritaanka. Waqtiga mishiinka dib loo soo cusbooneysiiyey, xawaaraha wuxuu aad u sareeyaa dhulka. "
Tani waa aasaas ahaan waxa aan u malaynayno inaan ku salaysnayno waxa daawadayaashu ay awood u yeesheen inay arkaan inta lagu guda jiro socodka noloshiisa ee isku dayga soo noqoshada. Mishiinka ayaa lumiyay awooda, calaamad ka timid dareenka ayaa soo baxday dhawr daqiiqadood ka dib soo kabashada.
Tani waa niyadjab aad u weyn oo loogu talagalay SpaceIL iyo qof kasta oo raacaya socdaalka Beresheet. Si kastaba ha ahaatee, hawlgalku waxa uu ku guulaystay dhowr siyaabood, oo ay ku jirto xaqiiqda ah in ay awood u leedahay in ay gasho qulqululaha qorraxda marka hore, taas oo aan ahayn hawl fudud.
Intaa ka sokow, XPrize Kooxda ayaa go'aansaday in ay abaalmarinta "Monshot Award" ee 1 Milyan Dollar ku siiso SpaceIL si ay uga caawiyaan kooxda in ay bilaabaan dhammaan shirkadaha ay qaadi doonaan kadib.
Sénagal: cuntooyinka dabada
Cilmi-baadhayaashu waxay ku guulaysteen in ay abuuraan qalab sida adag oo ah titanium iyo sida iftiinka qoraxda